अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) -
काठमाडौ। अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको अस्ट्रेलिया का’ण्डले सामाजिक संजाल तातिएको छ। केहि वर्ष अगाडी यस्तै जापान का’ण्डले सामाजिक संजाल तातिएको थियो।
सामाजिक संजालमा अस्ट्रेलिया का’ण्ड भाइरल भएपछी उक्त भिडियोमा देखिएकी युवती प्रष्टीकरण दिंदै लाइभमा आएकी छिन।
खासमा के भएको रहेछ त उक्त काण्डमा ? यो भिडियो हेरौं
यो पनि पढ्नुहोस: अस्ट्रेलिया ‘काण्ड’बारे बोलिन ज्वाला
काठमाडौ। सामाजिक सन्जालमा अहिले एक युबतिको आधा तस्बिर निकै भा’इरल भएको छ। खास गरि युबा पुस्तामाझ अस्ट्रेलिया कान्ड भन्दै सामाजिक सन्जालमा उनको पो र्न भिडियो सार्बजनिक भएपछी हङामा मच्चिएको हो, एक नारीको को मजाक र इ’ज्जत माथी बारम्बार युबाहरुले सामाजिक सन्जालमा खिल्ली उडाएपछी जापानमा बसेर विभिन्न समसामयिक बिषयमा कडा आवाज उठाउदै आउनुहुने ज्वाला सङ्रौलाले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै क’डा प्रतिक्रिया जनाएका छन।
के हो पारा साथीहरु???
युवा भनेको सोच हो, बिचार हो, सिंगो देश बोक्न सक्ने बलियो मेरुदण्ड हो, परिवर्तनको संबाहक हो अनि आफैंमा एउटा उर्जाशिल शक्तिले भरिएको युगको सुन्दर बिहानी हो! तर केहि साथीहरुले आफ्नो धरातल नै भुलेर , आफ्नो भूमिका नै भुलेर आफूमा भएको चिन्तन र बिचारलाई सामाजिक संजालमार्फत बार-बार दुरुपयोग गरेको देखेर मलाई धेरै दुख लागेको छ!
समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन भन्दा नकारात्मक क्रियाकलापलाई भाइरल गरेर कसैको जीबनको हाँसीमज्जा उडाउन र उसको जीबन नै तहसनहस गर्न कसैले नभेट्ने भैसकेछौं हामी! के हामीले पाएको यो उर्जाशिल समय यसैगरि नकारात्मक कुरा तिर खेर फ्याल्न र कसैको प्राईभेट जीबनको , कसैको ओच्छ्यानको, अनुहारको, शरिरको र इज्जतको ट्रोल बनाएर फेसबुकका भित्ता भित्तामा टाँस्न हो? म निन्दा गर्छु त्यस्ता देखावटी युवाहरुलाई जस्ले देश बिकाशका ठूला ठूला गफ लडाउँछन् तर आफू नकारात्मक सोचको दलदलमा भासिएका छन्!
कहिले जापान का’ण्ड भनेको छ , कहिले अस्ट्रेलिया का’ण्ड भनेको छ , कसैको ब्यक्तिगत जीबनको पाँच मिनेटलाई यसरी मज़ाक़ नबनाईदिनुस् साथीहरु! तपाईहरुले भनेका जुन जुन का’ण्डहरु छन् नि, तपाईहरुको पनि गोप्य जीबनमा ती सब चलेका छन्, ख़ाली ती बाहिर नआएर मात्र हो तपाईंहरु तिलस्मी इज्जतको झिनो आवरणमा ढाकिएको! दुधले नुहाएको सन्त महन्त कसैले पनि नबनिदिनुस् किनकी तपाईहरुको जीबनको अँध्यारो प्रहर भित्र तपाईहरुको पनि आकृति कालो र धमिलो छ!
हो, समाजका बिकृतिहरुलाई निर्मूल गर्नु पर्छ , खण्डन गर्नु पर्छ तर यसो भन्दैमा कसैको शरिर लाई भित्र भित्र खेलाएर उस्को बदनाम गर्न पाईन्छ संजालमा? के यो चाहि बिकृति हैन? के यो चाहि सामाजिक अपराध हैन? संजालमा भएका राम्रा राम्रा कामहरुलाई आजसम्म कस्ले भाईरल गर्यो? अमेरिकामा रहेर विश्वका युवाहरुको नेतृत्व गरिरहेकी जोली अमात्यलाई कस्ले देख्यो ? अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बसेका र विश्वका सातलाख बिधार्थीको अभिभाबक बनेर काम गरेका बिजय सापकोटालाई कस्ले चिन्यो? अमेरिकी सिनेटमा सँसद बन्ने हैसियत राख्ने नेपालका छोरा ह्यारी भण्डारीलाई कस्ले पढ्यो? सुन्नु भा छ यि र यस्तै थुप्रै नामहरु? आज तपाँईहरु कुनै एक महिलाको फ़ोटो र भिडियो भाईरल गरेर खुब मजा लिई रहनु भएको छ! सोच्नुस् ती महिला तपाँईको दिदीबहिनी या आफन्त परेको भए के गुज्रन्थ्यो तपाँईको मनमा ? So, stop harassing her! के यति भिड़ियोको आधारमा अब हामीले उनको बाँच्न पाउने अघिकारको नै बलि चढाउनु पर्ने हो? के लाग्छ ??
र , एउटा कुरो, त्यो जुन भिडियो छ नि , त्यो बारे सुनेको आधारमा मलाई के लाग्छ भने त्यो भिड़ियोमा केटाको अनुहार देखाएको छैन रे! यसबाट प्रस्ट छ कि ती बहिनीलाई जानी जानी बदनाम गराउन लागेका रहेछन् उनका पार्टनर ! यदि यस्तो हो भने तिन्लाई समातेर आवस्यक अनुसन्धान गरि कड़ा भन्दा कड़ा सजाय दिइयोस् ! प’क्रेर तुरन्त नेपाल झिकाएर ती ब्यक्ति माथी अनुसन्धान सुरु गर्न म सम्माननीय आईजीपी सर्बेन्द्र खनाल सरलाई अनुरोध गर्दछु! ती बहिनीले डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन ! खुलेर बाहिर आऊ, र आफूलाई फसाएको हो भने किटानी जाहेरी देऊ! म तिम्रो साथमा छु! तिमीले बाँच्न पाउनु पर्छ !! यो समाज त यस्तै हो, हामी नारीहरुकै कोखमा बस्छ, काखमा खेल्छ , छाती चुसेर हुर्कन्छ! अनि जब हुर्किएर ती’घ्रे बन्छ, फेरि हाम्रै शरिरमाथी बेसरम खेल्छ र अन्तत भुँईमा बजारेर कति सजिलै भनिदिन्छ , “ भाग र…डी! “